Xiaomi Mi5 တင်ဆက်မှုမှာတိုက်ရိုက် Androidsis
Xiaomi Mi5 ၏တရားဝင်တင်ဆက်မှုအဖြစ်အပျက်သည် MWC16 မှတိုက်ရိုက်ဖြစ်သည်
Francisco Ruiz | | UHI, Xiaomi က
El MWC16 တရားဝင်ဖွင့်သော်လည်း ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်၊ တနင်္လာနေ့တွင်တရားဝင်ဖွင့်သော်လည်း၊ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန်ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အထိစောင့်ရမည်။ Xiaomi Mi5 တရားဝင်တင်ဆက်မှုပွဲ၎င်းအနက်မှတစ်ခုသည်ယခုနှစ်မျှော်မှန်းထားသည့်နည်းပညာဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များအနက်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ အနန္တတန်ခိုးရှင် Samsung Galaxy S7 နှင့် S7 Edge တို့၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ည ၇း၀၀ နာရီတွင်တင်ပြမည်ဖြစ်သည်။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝြေခင်း 2016 Que သင်ဤ link ကိုအတူတူတိုက်ရိုက်မြင်နိုင်ပါသည် သို့မဟုတ် LG G5 ကိုတရားဝင်မိတ်ဆက်ပြသ.
ဤလိုင်းများအထက်တွင်ကျွန်ုပ်ကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်သည် embedded video ကိုထားရှိပါသည် Xiaomi Mi5 ၏တရားဝင်တင်ဆက်မှုကိုတိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်သည် ဒါကြောင့်သင်ဟာဘာမှမလွတ်သွားအောင်၊ ဘယ်နေရာမှာပဲရှိပါစေ၊ နာမည်ကြီးတရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဟာစက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့အမြင့်ဆုံးမှာနည်းပညာထုတ်ကုန်တွေနဲ့နည်းပညာထုတ်ကုန်တွေနဲ့ကဏ္ sector ရှိနိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီကြီးများကိုဘယ်လိုပြန်ရပ်တည်ချင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့နိုင်တယ်။ စျေးနှုန်းသက်သာ။
1 သို့သော် Xiaomi Mi5 အသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ယခုအချိန်အထိမည်သည့်အရာများသိနိုင်မည်နည်း။
1.1 ဒါက Xiaomi Mi5 ရဲ့ box ပါ
1.2 Samsung ဒီဇိုင်းနှင့် Xiaomi Mi5 ၏ပုံရိပ်များပေါက်ကြားခဲ့သည်
1.3 ဖြစ်နိုင်သည့် Xiaomi Mi5 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
2 ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရန် Androidsis မှ MWC16 ကိုလိုက်နာပါ
သို့သော် Xiaomi Mi5 အသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ယခုအချိန်အထိမည်သည့်အရာများသိနိုင်မည်နည်း။
ဒါက Xiaomi Mi5 ရဲ့ box ပါ
ဦး ဆုံးအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သိပြီးသားအရာများသည်ထိုအရာဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အစပြုနိုင်သည် Xiaomi Mi5 ၏ထုပ်ပိုးမှုသည် Xiaomi Mi4 ၏ထုပ်ပိုးမှုမျဉ်းအတိုင်းလိုက်နာလိမ့်မည် အရာအတွက်ကတ်ထူပြားအရောင်အတွက်ကတ်ထူပြား box ကိုအတူ terminal ကိုအဘယ်သူမျှမပုံရိပ်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည် ထိုအခါနာမည်ကျော်လိုဂိုသာညာဘက်အပေါ်ထောင့်တွင်တွေ့မြင်ရလိမ့်မည် Mi လူကြိုက်များတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှ။
Samsung ဒီဇိုင်းနှင့် Xiaomi Mi5 ၏ပုံရိပ်များပေါက်ကြားခဲ့သည်
စွပ်စွဲချက်သည် Xiaomi Mi5 ၏ဓာတ်ပုံများပေါက်ကြားခဲ့, သင်ဤ link ကိုအတူတူမြင်နိုင်ပါသည်အချို့သောပုံရိပ်တွေ, Xiaomi ကဒီအချိန်မှာ Xiaomi Mi5 နဲ့အတူပိုကြီးတဲ့ပုံကိုတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတာတောင်တွေ့နိုင်တယ်။ 5.5 " ယခုအချိန်၌ Apple ၏ iPhone ပုံစံနှင့်အလွန်ဆင်တူသည့်ယခင် terminal ၏လိုင်းနှင့်ဝေးသွားသောဒီဇိုင်းနှင့်အတူ Samsung Galaxy S7 လိုမျိုးအန္တရာယ်များစွာနဲ့ကြည့်ပါ.
ဖြစ်နိုင်သည့် Xiaomi Mi5 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
ဖြစ်နိုင်သမျှသည် Xiaomi Mi5 အသစ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ လာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ မှာငါတို့တွေ့လိမ့်မယ်၊ လက်တွေ့ကျကျအတည်ပြုပြီးပြီလို့ထင်ရလိမ့်မယ် RAM4GB နှင့် Processor ကိုအတူ Qualcomm Snapdragon 820 ဥပမာ LG G5 ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ quad-core ပရိုဆက်ဆာတစ်လုံး၊ GPU ကို Adreno 53Snapdragon0၏အပူမပါဘဲစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပါးခြင်းနှင့်သင့်အားအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးစွမ်းနိုင်မည့် 64-bit နည်းပညာနှင့်အတူ 810 ။
သင်၏မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားနှင့် ပတ်သက်၍၊ အထက်ပုံတွင် ၅.၅″ terminal နှင့်တူသော်လည်းအပြင်းထန်ဆုံးကောလာဟလများကဖော်ပြသည် ဤအချိန်တွင် FullHD resolution ဖြင့် ၅.၂″ ခန့်ရှိမည့် screen နှင့်အတူရောက်လာလိမ့်မည် ၎င်းတွင် 2K resolution ရှိနိုင်သော IPS panel ပါဝင်နိုင်သည်ဟုဆိုသော်လည်း
ကဲ့သို့သောအခြားရှုထောင့် 16 mpx အဓိကကင်မရာ သို့မဟုတ် 3600 mAh ဘက်ထရီ Android ထုတ်ကုန်များအထူးပြုမီဒီယာအမျိုးမျိုးမှမှတ်ချက်ပေးပြောဆိုခဲ့သည့် Xiaomi Mi5 အသစ်၏ထူးခြားချက်နှစ်ခုဖြစ်သည်။ Redmi Note အကွာအဝေးနှင့်အတူဖြစ်ပျက်နိုင်သည့်ဤနှင့်၎င်း၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောမျိုးကွဲနှစ်မျိုး ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားသောဆောက်လုပ်ရေးနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောဆိပ်ကမ်းနှင့်အတူတင်ပြလိမ့်မည်အခြားတစ်ခုမှာမူဖန်ထည်များပါ ၀ င်ပြီးသိုလှောင်မှုစွမ်းရည်နှင့် RAM မှတ်ဥာဏ်ပါရှိသည်။3Gb RAM နှင့် 16 Gb သိုလှောင်မှုသိုလှောင်မှုနှင့်အခြားပိုပရီမီယံ4Gb RAM နှင့် 32 Gb internal သိုလှောင်မှုနှင့်အတူတစ် ဦး ထက်ပိုသောအခြေခံမော်ဒယ်။
အမှန်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်နေ့အထိဟုတ်ကဲ့သို့မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့စောင့်ရမည် ဖေဖော်ဝါရီလ 24, ဒါမှမဟုတ်လာမယ့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သည်အထိစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်ဆိုင်းရန်အတူတူပင်ကဘာလဲ နံနက်စပိန်အချိန် 9အသေးစိတ်အားဖြင့်ပြီးသားအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည် Xiaomi Mi5 နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ သို့ဖြစ်လျှင်သံသယများမှ ထွက်၍ Android ကဏ္ in ရှိမျှော်လင့်ထားသည့်ဆိပ်ကမ်းများစတင်မိတ်ဆက်မည့်ကောလာဟလများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုထွက်ခွာသွားနိုင်သည်။
ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရန် Androidsis မှ MWC16 ကိုလိုက်နာပါ
နောက်ဆုံး၊ မင်းရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ခွင့်ပြုချက်အရ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိုင်စင်ကိုစာဖတ်သူတွေ၊ နောက်လိုက်တွေအားလုံးကိုကြော်ငြာခွင့်ပြုချင်တယ် Androidsis ပါ ယေဘုယျအားဖြင့်မိုဘိုင်းနည်းပညာ၏ပရိသတ်များ၊ အဆိုပါ Androidsis feed ကိုစာရင်းသွင်းပါ ဂရုပြုရန် ယခုနှစ်နည်းပညာဖြစ်ရပ်၏ဤအသစ်ထုတ်ဝေမှုကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်, un MWC16 ဘာစီလိုနာမိုဘိုင်းနည်းပညာပြပွဲမှကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည့်အရာအားလုံးကိုသင်မြင်နိုင်ရန်အတွက် Androidsis အသင်းသည်အမြဲတမ်းရှိနေပြီးချောက်ကြီး၏အောက်ခြေတွင်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
သင်တို့သည်လည်းငါတို့ကတဆင့်ငါတို့နောက်သို့လိုက်နိုင်ပါတယ် တွစ်တာ, Facebook က, Google+ မှာ သို့မဟုတ်ပင် Androidsisvideo channel ကိုစာရင်းပေးသွင်းပါ မင်းကိုမဆုံးရှုံးစေချင်ဘူး ဒီ MWC16 တွင်ဖော်ပြထားသောအကောင်းဆုံးဆိပ်ကမ်းများ၏ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Xiaomi က » Xiaomi Mi5 ၏တရားဝင်တင်ဆက်မှုအဖြစ်အပျက်သည် MWC16 မှတိုက်ရိုက်ဖြစ်သည်
LG က LG G5 ကို CAM Plus, Hi-Fi Plus, 360 VR, 360 CAM နှင့် Rolling Bot တို့ဖြင့်ပထမဆုံး modular စမတ်ဖုန်းကိုပြသခဲ့သည်။